Kusimaha Madaxweynaha oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Kusimaha Madaxweynaha oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho
Sabti, November, 10, 2018(HNN) Kusimaha Madaxweynaha Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa cambaareeyay weerarkii argagixisinimo ee shalay ka dhacay nawaaxiga Isgoyska KM4, gaar ahaan hotelka Saxafi.
“Anigoo ku hadlayay Magacayga iyo kan madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaan cambaareynayaa falkii argagisinimo ee galabta dhacay,dadkii ku geeriyooday Naxriistii jano Allaha haka waraabiyo kuwii uu dhaawac soo gaareyna Caafimaad deg deg ah allaha ha siiyo” Ayuu yiri Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Kusimaha Madaxweynaha ayaa sheegay in kooxdan ay caadeysatay dhiiga Shacabka Soomaaliyeed, isla markaana ay mar walba
beegsadaan dadka aan waxba galabsan sidoo kalena ay beegsadaan goobaha ay dadka isugu yimaadaan,wuxuuna tusaale usoo qaatay weerarkii ugu dambeeyay ee maleeshiyaadkan ay maanta dadka Shacabka ah ku xasuuqeen ayna kooxdan geysteen iyadoo ay tahay maalin jimcaha kana duwan maalmaha kale ee Alle sidoo kalena ah maalin ciideed.
“Waxay dad Shacab ah qarxiyeen iyadoo ay tahay maalin jimca ah oo ah maalin ka duwan maalmaha kale sidoo kale ay ciid u tahay dhamaan dadka muslimiinta ah waa koox caadeysatay daadinta dhiiga Shacabka Soomaaliyeed,waxaana dadka Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay u midoobaan la dagaalanka kooxaha Argagixisada ah” Ayuu yiri Kusimaha Madaxweynaha Ahna Guddoomiyaha Golaha Shacabka.
Ugu dambeyn Kusimaha Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Ahna Guddoomiyaha Golaha ayaa ku baaqay in loo midoobo la dagaalankooda islamarkaana meel looga soo wada jeesto si loo cirib tiro maadaamaa hadaba ay naf lacaari yihiin.
Kusimaha Madaxweynaha oo si kulul u cambaareeyay qaraxyadii shalay ka dhacay Muqdisho added by Ciise Cabdi Ciise on 10/11/2018